Kumaandoosta Danab oo Qarax fashiliyay | KEYDMEDIA ONLINE
Kumaandoosta Danab oo Qarax fashiliyay
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandoosta Danab ayaa fashiliyay qarax ay damacsanaayeen kooxda Al-Shabaab in ay ka geystaan magaalada Muqdisho.
JILIB, Soomaaliya - Ciidanka Danab ee ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in degaanka Jilib ee gobolka Shabeellada hoose ay ku gubeen gaari qarax siday oo kooxda Al-Shabaab ay lahaayeen, kuwaasi oo sida lagu diyaarinayay goobtaasi.
Howlgalkan looga hortagay Qaraxa ayaa dhacay saakay Barqadii waxaana sartaakiishii howlgalkan fulineysay ay sheegeen in ujeedkiisu ahaa in lagu bur buriyo qaraxyadaasi, isla marakaana waxaa ciidanku ay sheegen in ay cagta mariyeen fariisimo ay Al-Shabaab ku lahaayeen degaankaasi.
Saraakiisha howlgalka hogaamineysa ayaa waxaa ay warbaahinta u sheegen in howlgalka qorshihiisu ahaa in looga hortago isku day Al-Shabaab ay ku doonayeen in ay soo galiyaan magaalada Muqdisho gaari Saruf ah oo lagu soo rarary qaraxo.
Inta badan xilliyadan oo kale waxay laba-laabaan kooxda Al-Shabaab weerarada ismiidaaminta ah iyadoo xalay ay ku beegneed 17 bisha barakeysan ee Ramadaan, xilligaas oo kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan Soomaaliya weerar ay ugu magac dareen "Dagaalkii Beder" iyagoo khaarajiya dad shacab iyo ciidan isugu jira, islamarkaana bur-burin ugeysta dhismayaal, gawaari iyo ganacsi farabadan.
Magaalada Muqdisho oo baryihii udambeeyay la ciir-ciireysay dagaallo ka dhashay muran siyaasadeedkii dalka ka jiray ee sababta u ahaa muddo kororsigii Farmaajo sameystay!